Ndeipi nzira yakazara yetimu mukuyedza nekukurumidza?
Kuru Agile Chii chiri Chese Chikwata Chinosvika muAgile Testing?
MuAgile, iyo yose-timu nzira inoreva kusanganisa wese munhu ane ruzivo rwakasiyana uye hunyanzvi hwekuona projekiti kubudirira. Chikwata ichi chinosanganisira vamiririri kubva kumutengi anozivikanwawo sekuti Muridzi Wechigadzirwa, uye nevamwewo vane chekuita nezvebhizinesi vanoona zvigadzirwa.
Chikwata chinofanirwa kunge chiri chidiki, kazhinji pakati pevashanu kusvika kune vanomwe, zvisinei, zvikwata zvakabudirira zvakaonekwa pamwe nevashoma sevanhu vatatu uye vakawanda sevapfumbamwe.
Sezvineiwo, timu yese inogoverana nzvimbo imwechete yebasa uye vakagara seboka, sezvo co-nzvimbo inosimudzira kwazvo kutaurirana nekudyidzana.
Maitiro eboka rese-anotsigirwa kuburikidza nemisangano yezuva nezuva yekumira inosanganisira nhengo dzese dzechikwata, uko kufambira mberi kwebasa kunoziviswa uye chero zvipingaidzo kufambira mberi zvinoratidzwa. Iyo yakazara-timu nzira inosimudzira inoshanda uye inoshanda timu simba.
Zvakare, kushandisa iyo yakazara-timu nzira, zvinoreva kuti vanoedza vanogona kubatsira vanogadzira kunyora zvoga zviedzo uye zvinopesana uye varidzi vezvigadzirwa vanogona kubatsira ne Kuongorora uye User Kubvuma Kuedzwa.
Iko kushandiswa kweye-yakazara timu nzira yekuvandudza chigadzirwa ndeimwe yemabhenefiti makuru ekuvandudza kweAgile. Kubatsira kwayo kunosanganisira:
Kuvandudza kutaurirana uye kubatana mukati mechikwata
Kugonesa akasiyana hunyanzvi maseti mukati mechikwata kuti asimudzirwe kubatsira purojekiti
Kugadzira mhando munhu wese mutoro
Mumapurojekiti eAgile, maTesters kana maQAs havasi ivo chete vane basa rehunhu hwechigadzirwa asi timu yese inoona nezvehunhu.
Musimboti wezvese-timu nzira iri mune vanoedza, vanogadzira, uye vamiriri vebhizinesi vanoshanda pamwechete mudanho rega rekuvandudza maitiro.
Vanoedza vachashanda padhuze nevose vavandudzi uye vamiriri vebhizinesi kuti vaone kuti iwo anodikanwa mamazinga ehunhu anowanikwa. Izvi zvinosanganisira kutsigira pamwe nekudyidzana nevamiriri vebhizinesi kuvabatsira kugadzira bvunzo dzakakodzera dzekugamuchirwa, kutsanangura tsananguro yezvakaitwa, kushanda nevagadziri kuti vabvumirane pane yekuyedza zano , uye kufunga nezve test automation nzira. Vanoedza vanogona kudhinda uye nekuwedzera ruzivo rwekuyedza kune dzimwe nhengo dzechikwata uye kukurudzira kukura kwechigadzirwa.
Chikwata chose chinobatanidzwa mukubvunzana kana misangano umo zvigadzirwa zvinogadzirwa, kuongororwa, kana kufungidzirwa. Pfungwa yekubatanidza vaedzo, vagadziri, uye vamiriri vebhizinesi mune ese hurukuro hurukuro inozivikanwa sesimba revatatu, kana matatu maAmigos.
lg g3 kaviri pombi isiri kushanda
renyeredzi tab s 10.5 marshmallow
iOS 11.3 inotarisirwa kuburitsa nhasi, heino maapos uye & apos; s nyowani (Gadziridza)
Google Mepu ikozvino inokubatsira kuyeuka pawakamisa mota yako
LG V30 vs LG G6 vs LG V20: An interface kuenzanisa
Heano maitiro ekucheka, kucheka uye kugadzirisa rwiyo pane yako iPhone kana iPad neiyi yemahara odhiyo edhita